Abavelisi bematrasi base China | URAYSON
Ekhaya > Iimveliso > Imatrasi enogwebu
Iimatrasi zeRayson Foam zizo zonke iibhedi ezinogwebu ezaziwa kakhulu kubathengi bamatrasi abakwi-Intanethi. Ziyakwenziwa ngezinto ezahlukeneyo ze-foam, ukusuka kwimemori ye-foam ukuya kwi-polyfoam, kwaye iqulethe iindawo ezininzi ezizodwa. Iibhedi zamagwebu zinokuthamba okanye ziqine, uhlahlo-lwabiwo mali okanye ubunewunewu, ke kukho inani elikhulu leentlobo ngaphakathi kolu luhlu.
Umthengisi oGqibeleleyo we-10Inch eMhlophe kuMatrasi
Rayson kwiRayson yeNdawo yezeMizi-mveliso, eHuasha Road, eShishan, eFoshan High-Tech Zone, eGuangdong, China. Iimveliso eziphambili ze-10Inch White Memory Foam Mattress Supplier Le mveliso ichasene kakhulu nentsholongwane. Izinto zayo ezinokuhambisa ipropathi yokuntywila ukufuma kunokunceda ukuthintela ukukhula kweentsholongwane ezibangela ivumba ezinyaweni. I-Rayson Global Co., Ltd yintsebenziswano yase-Sino-US, eyasungulwa ngo-2007 e-Shishan Town, eFoshan High-Tech Zone, kwaye ihlala kufuphi namashishini adumile njenge-V Ukuza kuthi ga ngoku, uRayson upasile isiqinisekiso senkqubo yolawulo lomgangatho wamazwe aphesheya. Zonke iimveliso kubandakanya imveliso yethu entsha zinikezelwa kuyilo olutsha, umgangatho oqinisekisiweyo, kunye namaxabiso okhuphiswano. Emva kweminyaka yophuhliso, siye saseka ubudlelwane intsebenziswano ixesha elide kunye nabathengi bethu kulo lonke ihlabathi. Nceda uqiniseke ukuba sinelungelo lokuthumela ngaphandle iimveliso zethu kwaye ngekhe kubekho monakalo wenzekileyo kwimpahla ehanjisiweyo. Siyakwamkela ngokunyanisekileyo umbuzo wakho kunye nomnxeba. Ngemigca epheleleyo yokuvelisa kunye nabasebenzi abanamava, uRayson unokuzimela ngokuzimeleyo, aphuhlise, avelise, kwaye avavanye zonke iimveliso ngendlela efanelekileyo. Kuyo yonke le nkqubo, iingcali zethu ze-QC ziya kubeka esweni inkqubo nganye yokuqinisekisa umgangatho wemveliso. Ngaphezu koko, ukuhanjiswa kwethu ngexesha elifanelekileyo kwaye kunokuhlangabezana neemfuno zabo bonke abathengi. Siyathembisa ukuba iimveliso zithunyelwa kubathengi zikhuselekile kwaye zivakala. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye ufuna ukwazi okungakumbi malunga nathi, Tsalela umnxeba ngqo. Oko kwamiselwa, uRayson ujonge ukubonelela ngezisombululo ezibalaseleyo nezinomtsalane kubathengi bethu. Simisele eyethu i-R& D iziko loyilo lwemveliso kunye nophuhliso lwemveliso. Silandela ngokungqongqo iinkqubo zolawulo lomgangatho esemgangathweni ukuqinisekisa ukuba iimveliso zethu ziyahlangabezana okanye zigqithile kulindelo lwabathengi bethu. Ukongeza, sibonelela ngeenkonzo zentengiso yasemva kwexesha kubathengi kwihlabathi liphela. Abathengi abafuna ukwazi ngakumbi ngemveliso yethu entsha okanye inkampani yethu, qhagamshelana nathi nje. Zeziphi iindlela zokuhlawula ozamkelayo? I-LC ekuboneni / nge-TT, i-30% ye-Deposi kunye ne-70% eseleyo ichasene neekopi zamaxwebhu okuhambisa witinin iintsuku ezisi-7 zomsebenzi. 1. Beka ibhokisi kwindawo ethe tyaba kwigumbi lakho lokulala, tsala ngononophelo umatrasi uze ubeke ebhedini yakho. 2.Sika isikhwama sangaphandle ngononophelo ngesikere uqiniseke ukuba awusiki iplastiki embi ngaphakathi okanye umatrasi, musa ukumangalela imela. Qengqa umatrasi otywiniweyo usecaleni kwebhedi yakho 4.Sika ngononophelo ingxowa yeplastiki ecaleni kwewotshi njengoko umatrasi uqala ukubola, Susa ingxowa yeplastiki. 5.Allow iiyure ezingama-24 umandlalo wakho omtsha ukwandisa ngokupheleleyo.Ndingayindwendwela mveliso wakho? Ewe, wamkelekile ukuba utyelele umzi-mveliso wethu nangaliphi na ixesha, sikufuphi nesikhululo seenqwelomoya saseGuangzhou Baiyun, kungathatha iyure enye ngemoto, kwaye sinokucwangcisa imoto ukuba ikulande.
I-New Rolled Euro Top futon mattress eneziphethu + Ukuba ufuna ipokotho entsha yomngxunya wento yokuphuma enika intuthuzelo, inkxaso kunye nokukunceda ufumane ubuthongo obuhle ebusuku, ukwindawo elungileyo. Apha unokufumana uluhlu olubanzi lweematriki ngamaxabiso okhuphiswano, kwaye zonke zixhaswa ngesithembiso somdlalo wexabiso., Https: //www.raysonglobal.com.cn